एसइइ पछि के पढाउने ? अभिभावकलाई अनुरोध ! – DeviRam Acharya
By Deviram Acharya	 प्रकाशित मिति: Jun 30, 2019
लाखौँ विद्यार्थी यतिखेर एसइइको नतिजा हातमा बोकेर कक्षा ११ मा भर्ना हुन खोज्दैछन् र सँगसँगै किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दैछन् ।
आफूले आँफैलाई राम्रो भन्दै ठूलो गर्जनका साथ विज्ञापन गरिरहेका कलेज ! आफ्ना छोराछोरीलाई ठूलो मान्छे बनाउने सपना देखिरहेका अभिभावक !
रेडियो टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा उत्कृष्ट कलेजका विज्ञापन, विद्धानहरूका सल्लाह र सुझाव त झन् कतिकति !
शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि दिवास्वप्न, तोतोचान, हामी आमाबाबु जस्ता पुस्तकले दिने ज्ञान ४ जना पिएचडीधारीले दिने ज्ञानभन्दा उत्कृष्ट हुन सक्छ । राजनीतिमा रुचि भएकाहरुका लागि त्यस्तै किताब हुन सक्छन् । किशोर लक्षित साहित्य लेख्ने प्रचलन शुरु भएको छ ।
नेपालीमा अनुवाद गरिएको एक किशोरीको डायरी र नेपाली लेखक विजय सापकोटाको उडान जस्ता उपन्यासहरुले किशाेर किशोरीका मनोविज्ञान बुझ्न सघाउँलान् ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन । अभिभावकले विषयवस्तुलाई रटान लगाउन मात्र सिकाउने होइन, त्यसलाई जीवन र जगतसँग जोडेर हेर्न सिकाउनु पर्छ । सिद्धान्तको रटान होइन व्यवहार र सिप सिकाउनेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
2074/3/15 मा www.edukhabar.com मा प्रकाशित ।